Fifidianana Parlemantera Ejipsiana · Global Voices teny Malagasy
Fifidianana Parlemantera Ejipsiana
Voadika ny 03 Novambra 2018 18:48 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Novambra 2005)
Vitsy no faly tamin'ny voka-pifidianana omaly, ankoatra ireo efa faly tamin'ny toedraharaha Ejipsiana na ny Firahalahian'ny Silamo. Mieritreritra ny hifindra monina i Big Pharaoh, fihetsehampo izay taterin'i Sandmonkey fa manako ao amin'ny firenena (afa-tsy ny iray amin'ireo namany izay nanao tsoakevitra fa ny “Islam no vahaolana”.)
Ny tezitra mafy indrindra angamba dia i Ayman Nour (mpifaninana lehibe tanatin'ny fifidianana Filoham-pirenena natao ny Septambra lasa teo ary mpitarika ny antoko Al Ghad [rohy maty]) izay resy indray manoloanà mpifaninana iray hafa avy ao amin'ny Antoko Demôkratika Vaovao.
Mitantara ny zava-niainany tamin'izy nanara-maso ny fifidianana i Jeramy of Arabia. Manana fomba fijery sahisahy koa i Zeinobia.
Toa tsy nahovoka firy hanovàna ny latsa-bato tamin'ity fihodinana voalohany ity ireo hetsika sy ezaka hanena ny herin'ireo antoko mpitondra tahaka ny Itharak, ny Save Egypt Front, sy ny sorabaventy maneho X manindry ny sary famantarana tsinambolana sy rameva (sary famantarana ireo antoko mpitondra) miaraka amin'ny teny hoe “ny feonao ho an'ny fanoherana”.
Raha hamaky ireo lahatsoratra Arabo momba ny fifidianana, tsidio ny Ramy sy ny Digressing.